बालकृष्ण ढुंगेल रिहा भएपछि सडकमा नेवि संघको नाङ्गो प्रदर्शन ! — Sanchar Kendra
बालकृष्ण ढुंगेल रिहा भएपछि सडकमा नेवि संघको नाङ्गो प्रदर्शन !
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन दिन रात अनबरत लडेका माओवादी नेता तथा पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवशकै दिन रिहा गरेपछि नेविसंघले बिरोध गरेको छ ।
बालकृष्ण ढुंगेलले गणतन्त्र माग गर्दै जनयुद्ध लड्दा नेविसंघको माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपालमा गणतन्त्रको माग गर्नेहरुलाई आतंककारी घोषणा गर्ने र देशमा संकटकाल लगाएर गणतन्त्र माग गर्ने नेता कार्यकर्ताका टाउकाको मूल्य तोक्ने भूमिकामा थियो ।
जनयुद्धको बेला माओवादीले गाउँका जाली फटाहा, गुण्डागर्दी गर्ने, बलात्कार गर्ने र अन्य त्यस्तै खाले अपराधीलाई सफाया गरेको थियो । त्यसैबेला ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ पनि माओवादीद्वारा मारिएका थिए भन्ने आरोप छ । यद्दपी उक्त घटना अझै पुष्टी भएको छैन ।
उनै उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको आरोपमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्धकालमै जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । बालकृष्ण ढुंगेल त्यतिबेला उक्त क्षेत्रको कमाण्ड गर्ने नेता भएका कारण उनलाई मुद्दा लगाइएको हो । तर श्रेष्ठको हत्यामा उनकै हात छ छैन यो भने एकिन भएको थिएन ।
श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा २ पटक जेल सजाय कटाएर रिहा भइसकेका ढुंगेललाई गत बर्ष ललितपुरबाट प्रहरीले पुनः उही मुद्दामा पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको थियो ।
तेस्रोपटक जेल सजाय काटी रहेका ढुंगेलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार उनि मंगलबार रिहा भएका हुन् । उनलाई रिहा गरेपछि गणतन्त्रका पक्षधरहरुले खुसी ब्यक्त गरेका छन् भने लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले बिरोध गरेका छन् ।
ढुंगेललाई रिहा गर्ने सरकारी निर्णयका विरोधमा मंगलबार नेविसंघले नाङ्गो प्रदर्शन गरेको छ । नेवि संघले ‘हत्यारा छाड्न पाइँदैन, ओली सरकार चाहिँदैन’ भन्ने प्लेकार्डसहित नारा जुलुस लगाएर नेविसंघ सभापति नैनसिंह महरको नेतृत्वमा नाङ्गो प्रदर्शन गरेको हो ।
सोमबार रातीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ सय १६ जनाको सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस स्वीकृत गरेपछि मंगलबार बिहानै ढुंगेलको रिहाई भएको थियो ।
यसैबीच जेलबाट रिहा भएपछि बालकृष्ण ढुंगेलले अदालतको बेन्चबाट न्याय बलात्कार भएको देशमा आफु पटक पटक जेल परेर जेल जीवनबाट खुल्ला संसारमा आएकोमा खुसी ब्यक्त गरेका थिए ।
उनले जेलबाट मुक्त भएपछि अण्डरलाईन नेकपाको मुख्यालय पेरिसडाडा पुगेर आफ्ना समर्थक शुभचिन्तक माओवादी कारकर्तालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
ढुंगेलको सम्बोधन जस्ताको त्यस्तै